Antaninandro : tovolahy telo voavelin’ny «bois rond» | NewsMada
Fampihorohoroana ? Teny Antaninandro indray nahenoana ity resaka vely « bois rond » ity. Ny alakamisy alina teo, tokony ho tamin’ny 11 ora teo, tovolahy vao avy nanala BEPC nody alina no sendra ireo olon-dratsy tamin’ny toerana antsoina hoe Sainte Marie kely. Voalazan’ny mpitandro filaminana fa avy nilanonana niaraka tamin’ny namany ireo, ary hamonjy fodiana no sendra ireo olon-dratsy. Nosakanan’ireo izy telo lahy ary namaly ireto farany nanoloana izany. Raikitra ny fifandonana ka voavelin’ny “bois rond” nisy fantsika ny roa lahy. Torana mihitsy ny iray, ary novelomina teny amin’ny HJRA vao nahatsiaro tena. Tafatsoaka kosa ny tovolahy fahatelo.
Tsy nisy zavatra very teny amin’ireto tanora ireto, raha ny fanazavana. Izany hoe, mety asa fampihorohoroana mihitsy, indrindra ny fampiasana ny anaran’ity hazobe ity. Teny Ivato teny niantombohany, avy teny Ambohitsoa sy Ivanja, izay nisy vehivavy iray handeha hiasa maraina lasibatra tamin’izany. Efa nisy ihany ny olona tratra tamin’izany, saingy nangingina teo ny raharaha, ary izao miverina izao indray.
Mahagaga ihany koa etsy andaniny ny amelan’ny ray aman-dreny tovolahikely, vao manala BEPC mivoaka alina. Ho avy ny fanalana azy vita Bacc, tokony mba samy hitandrina ny rehetra, ary mba handrara ny zanany ny ray aman-dreny amin’izao toe-draharaha tsy azo antoka izao. Andaniny ny mpitandro filaminana, hampitombo ny fisafoana sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany fa tena ilaina izany izao.